15 Zvino Jehovha akaramba achitaura naMosesi naAroni, achiti:
2 “Taurai nevanakomana vaIsraeri, muti kwavari, ‘Kana murume akava nezvinoyerera+ zvinobva munhengo yake yokubereka nayo, zvinoyerera zvake hazvina kuchena.
3 Uku ndiko kuchava kusachena kwake kunokonzerwa nezvinoyerera zvake: Nhengo yake yokubereka nayo ingava yabuda zvinoyerera kana kuti nhengo yake yokubereka nayo ingava yavharwa nezvinoyerera zvake, ikoko ndiko kusachena kwake.
4 “‘Mubhedha wose ungararirwa nomunhu ane zvinoyerera uchava usina kuchena, uye chero chinhu chipi zvacho chaangagarira chichava chisina kuchena.
5 Munhu angabata mubhedha wake anofanira kugeza nguo dzake, uye anofanira kugeza nemvura, ova asina kuchena kusvikira manheru.+
6 Munhu wose anogarira chinhu chakagarirwa neane zvinoyerera anofanira kugeza+ nguo dzake, uye anofanira kugeza nemvura ave asina kuchena kusvikira manheru.
7 Munhu wose anobata muviri womunhu ane zvinoyerera+ anofanira kugeza nguo dzake uye iye anofanira kugeza nemvura ave asina kuchena kusvikira manheru.+
8 Kana munhu ane zvinoyerera akapfira mate mumwe munhu akachena, anofanira kubva ageza nguo dzake uye ageze nemvura ave asina kuchena kusvikira manheru.
9 Chigaro+ chero chipi zvacho chakagarirwa nomunhu ane zvinoyerera chichava chisina kuchena.
10 Munhu anobata chinhu chose changa chiri pasi pake achava asina kuchena kusvikira manheru; uye iye anozvitakura anofanira kugeza nguo dzake, uye anofanira kugeza nemvura ave asina kuchena kusvikira manheru.
11 Munhu angabatwa nomunhu ane zvinoyerera+ kana asina kugeza maoko ake nemvura anofanira kubva ageza nguo dzake uye iye ageze nemvura ave asina kuchena kusvikira manheru.
12 Mudziyo wevhu ungabatwa nomunhu ane zvinoyerera unofanira kuputswa;+ asi chero mudziyo upi zvawo wakagadzirwa nomuti+ unofanira kugezwa nemvura.
13 “‘Zvino kana munhu ane zvinoyerera akava akachena pazvinoyerera zvake, anofanira kubva averenga mazuva manomwe okuti anatswe,+ uye anofanira kugeza nguo dzake ogeza muviri wake nemvura yakachena;+ uye achava akachena.
14 Pazuva rechisere anofanira kutora magukutiwa maviri+ kana kuti hangaiwa duku mbiri, auye pamberi paJehovha pasuo retende rokusanganira ozvipa mupristi.
15 Mupristi anofanira kuzvibayira, imwe chete ive chinopiwa chechivi uye imwe yacho ive chinopiwa chinopiswa;+ uye mupristi anofanira kumuyananisira pamberi paJehovha pamusoro pezvinoyerera zvake.
16 “‘Zvino kana murume akabuda urume,+ anofanira kubva ageza muviri wake wose nemvura ave asina kuchena kusvikira manheru.
17 Nguo chero ipi zvayo nedehwe chero ripi zvaro zvinodonherwa nourume zvinofanira kugezwa nemvura zvive zvisina kuchena kusvikira manheru.+
18 “‘Kana ari mukadzi uyo murume anorara naye pobuda urume, ivo vanofanira kugeza nemvura vave vasina kuchena+ kusvikira manheru.
19 “‘Zvino kana mukadzi aine zvinoyerera, uye zvinoyerera mumuviri wake riri ropa,+ anofanira kuramba ari pakusachena+ kwake kwokuva kumwedzi kwemazuva manomwe,+ munhu wose anomubata achava asina kuchena kusvikira manheru.
20 Chinhu chose chaangararira pakusachena kwake kwokuva kumwedzi chichava chisina kuchena,+ uye chinhu chose chaangagarira chichava chisina kuchena.
21 Munhu wose anobata mubhedha wake anofanira kugeza nguo dzake, uye iye anofanira kugeza nemvura ave asina kuchena kusvikira manheru.+
22 Munhu anobata chero chinhu chipi zvacho chaakagarira anofanira kugeza nguo dzake, uye iye anofanira kugeza nemvura ave asina kuchena kusvikira manheru.+
23 Zvino kana iye akagara pamubhedha kana kuti pane chimwe chinhu, munhu anochibata+ achava asina kuchena kusvikira manheru.
24 Kana murume akangorara naye, kusachena kwake kwokuva kumwedzi kukava pamurume wacho,+ iye anofanira kubva ava asina kuchena kwemazuva manomwe, uye chero mubhedha upi zvawo waangararira uchava usina kuchena.
25 “‘Asi mukadzi, kana zvinoyerera zveropa rake zvikayerera kwemazuva mazhinji+ painenge isiri nguva yokusachena kwake kwokuva kumwedzi,+ kana kuti kana akava nezvinoyerera kupfuura nguva yokusachena kwake kwokuva kumwedzi, mazuva ose ezvinoyerera zvake zvisina kuchena achava semazuva okusachena kwake kwokuva kumwedzi. Iye haana kuchena.
26 Chero mubhedha upi zvawo waangararira pamazuva ose ezvinoyerera zvake uchaita somubhedha wepanguva yokusachena kwake kwokuva kumwedzi,+ uye chero chinhu chipi zvacho chaangagarira chichava chisina kuchena sokusachena kwake kwokuva kumwedzi.
27 Munhu anozvibata+ achava asina kuchena, uye anofanira kugeza nguo dzake ogeza nemvura ave asina kuchena kusvikira manheru.
28 “‘Asi kana achena pazvinoyerera zvake, iye anofanirawo kuverenga mazuva manomwe, uye kana iwo apera achava akachena.+
29 Pazuva rechisere anofanira kutora magukutiwa maviri+ kana kuti hangaiwa duku mbiri, uye anofanira kuuya nadzo kumupristi pasuo retende rokusanganira.+
30 Mupristi anofanira kuita kuti imwe ive chinopiwa chechivi uye imwe yacho chinopiwa chinopiswa;+ uye mupristi anofanira kumuyananisira+ pamberi paJehovha nokuda kwezvinoyerera zvake zvisina kuchena.
31 “‘Zvino munofanira kuita kuti vanakomana vaIsraeri vasiyane nokusachena kwavo, kuti varege kufira mukusachena kwavo nokuda kwokusvibisa kwavo tebhenekeri yangu, iri pakati pavo.+
32 “‘Uyu ndiwo mutemo pamusoro pomurume anenge aine zvinoyerera+ nomurume anenge aine urume+ hungabuda kwaari zvokuti anova asina kuchena nahwo;
33 nomukadzi anenge ari kumwedzi+ pakusachena kwake, uye munhu anenge aine zvinoyerera,+ angava munhurume kana kuti munhukadzi, uye angava murume anorara nomukadzi asina kuchena.’”